နိုင်ဂျီးရီးယား: ဂျီဟတ်ဝါဒီတိုင်းပြည်မြောက်ဘက်တွင်အများအပြားစစ်သားကိုသတ် - JeuneAfrique.com - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » မူဝါဒ "နိုင်ဂျီးရီးယားဂျီဟတ်ဝါဒီတိုင်းပြည်မြောက်ဘက်တွင်အများအပြားစစ်သားကိုသတ် - JeuneAfrique.com
နိုင်ဂျီးရီးယား: ဂျီဟတ်ဝါဒီတိုင်းပြည်မြောက်ဘက်တွင်အများအပြားစစ်သားကိုသတ် - JeuneAfrique.com
တစ်ဦးအုပ်စုခွဲကနေအနောက်အာဖရိက (Iswap) တွင်အစ္စလာမ့်နိုင်ငံတော်အုပ်စုတစ်စု၏တနင်္လာနေ့ 10 စက်တင်ဘာလတိုက်လေယာဉ်များ, ဘိုကိုဟာရမ်၏ပြည်နယ်အတွက်, Gudumbali မြို့မှခရီးသွားလာခဲ့ပါတယ်တဲ့ယာဉ်တန်းပေါ်မှာမီးဖွင့်လှစ် Bornoကျနော်တို့ကလုံခြုံရေးသတင်းရပ်ကွက်များကဆက်ပြောသည်ပါနဲ့။ Iswap င်း၏တိုက်လေယာဉ်စစ်သားများစွာသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရခဲ့သညျကား, တိုက်ခိုက်မှုကိုများအတွက်တာဝန်ပြောဆိုထားသည်။
"ကျနော်တို့ကအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအများအပြားစစ်သားများ, မော်တော်ယာဉ်များနှင့်လက်နက်များဆုံးရှုံးခဲ့ရ," အမည်မဖော်လိုသူတစ်ဦးကလုံခြုံရေးသတင်းရပ်ကွက်ကပြောသည်။ နောက်ထပ်လုံခြုံရေးအရင်းအမြစ်သေဆုံးသူ "ကြီးမားသော" ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
တကျိပ်နှစ်များတွင်အရှေ့မြောက်ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဂျီဟတ်ဝါဒီသောင်းကျန်းမှုနှင့်၎င်း၏ဖိနှိပ်မှု 27 000 သေဆုံးမှုထက် ပို. ဦးသေဆုံး, ခန့်နှစ်ခုသန်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့လူပေါင်းနေဆဲအိမ်ပြန်လို့မရပါဘူး။
အဆိုပါ Iswap ဇူလိုင်လကတည်းက 2016, 2018 အတွက်ဘိုကိုဟာရမ်ကွဲကွာခြင်းနှင့်တိုင်းပြည်၏အရှေ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းဆန့်ကျင်သည်သူ၏တိုက်ခိုက်မှုများအရှိန်။ မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း, သူ့တိုက်လေယာဉ်များ, ကင်မရွန်းနှင့်အတူနယ်စပ်အနီးရှိဒေသများရှိဘိုကိုဟာရမ်၏သမိုင်းဝင်ခေါင်းဆောင်အပေါ်သစ္စာယောက်ျားကထိန်းချုပ်ထားဧရိယာ၎င်းတို့၏ရှေ့မှောက်တွင်တိုးလာကြပါပြီ, Abubakar Shekau.
ကင်မရွန်း: ရှင်ပေါလု Biya အင်္ဂလိပ်အကျပ်အတည်းအပေါ် "အလွန်ကြီးစွာသောအမျိုးသားရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး" ထုတ်ပြန်ကြေညာ - JeuneAfrique.com
Youtube : PASSION WAGS. La Gantoise – Saint-Etienne : découvrez les femmes des joueurs des deux équipes en pho